वाक स्वतन्त्रता कि ‘हेट स्पिच' ? : पूर्व मिस नेपाल सृष्टि पनि पुगेकी थिइन् प्रहरीसमक्ष
ARCHIVE, NEWSPAPER » वाक स्वतन्त्रता कि ‘हेट स्पिच' ? : पूर्व मिस नेपाल सृष्टि पनि पुगेकी थिइन् प्रहरीसमक्ष
काठमाडौं - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत गाली गलौज गरेको आरोपमा दुई व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । उनीहरूले राष्ट्रपति भण्डारीलाई अश्लील शब्द प्रयोग गरी फेसबुकमा स्टाटस पोस्ट गरेका थिए । पक्राउ परेका उनीहरूको आइडी सक्कली थियो, त्यसैले प्रहरीलाई पक्राउ गर्न गाह्रो भएन । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । तर, नक्कली आइडी बनाएर उनले गाली गलौज गरेको भए प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन गाह्रो पर्ने थियो ।
साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतले मात्र हेर्छ । प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखा र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले मुद्दा चलाउने गरेका छन् । ‘उपत्यकाभन्दा बाहिर मुद्दा नचल्ने र उजुरीको पनि अनुसन्धान नहुने भएकाले दूरदराजका पीडितले काठमाडौंसम्म कष्ट गर्नुपर्ने र दुःख पाउने गरेका छन्', अपराध महाशाखाका प्रहरी अधिकृत भन्छन् । नेपाल प्रहरीले साइबर ब्युरो गठन प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको छ । त्यसबाहेक साइबरलाई विशिष्टीकृत हुनेगरी ऐन बनाउने कामको अत्तोपत्तो छैन ।